अक्षयको ‘लक्ष्मी’ डिजिटल प्लेटफर्ममा सफल कि असफल ? - Himalayamail.com
अक्षयको ‘लक्ष्मी’ डिजिटल प्लेटफर्ममा सफल कि असफल ?
मुम्बई। बलिउडमा नायक अक्षय कुमार र नायिका कियरा आडवाणीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘लक्ष्मी’ नोभेम्बरमा डिज्नी, हटस्टारबाट रिलिज भयो । कोरोनाका कारण हलहरु बन्द भएपछि यो चलचित्रलाई ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज गरिएको हो ।
डिज्नी र हट स्टारले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको चलचित्र थियो, नायक अक्षय कुमारको ‘लक्ष्मी’ । रिलिज अगाडि निकै आशाका साथ हेरिएको यो चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिन रेकर्ड ब्रेक गर्यो । दर्शकले यो चलचित्रलाई पहिलो दिन उत्साहका साथ हेरे । चलचित्र रिलिज भएको केही घन्टामै यसले भ्यूअरसिपको रेकर्ड तोडेको बताइएको थियो । यो चलचित्रले डिजिटल प्लेटफर्ममा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै हेरिने चलचित्रको रेकर्ड बनाएको उल्लेख थियो । यो कुराको जानकारी डिज्नी र हटस्टारका संचालकले ट्विटरमार्फत दिएका थिए ।
तर, दर्शक र समिक्षकको नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण चलचित्रले डिजिटल प्लेटफर्ममा दर्शकको साथ उल्लेख पाउन सकेन ।